Iifoto zikaJennifer Lopez ezihamba ze kunye neVidiyo zezeSondo eziNqunu- iScandalPlanet - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
Iifoto zikaJennifer Lopez ezihamba ze kunye neVidiyo zeSondo ezize
Le mifanekiso kaJennifer Lopez ehamba ze kunye nokuqokelelwa kwemiboniso yesondo kuya kukwenza ukuba uqhube yonke iblukhwe yakho. Eyokuqala ivela kwimovie yakhe yamva nje. Kodwa oyena mntu ndimthanda kakhulu usekupheleni kwephepha. Apho ungabona i-JLo ehamba ze kwiividiyo zesini esahlukileyo. Inamandla kwaye iluhlaza. Kwaye ulongezo olufanelekileyo kuqokelelo lwethu lwe-celebs oluhamba ze! Ndingathanda ukumbona ehamba ze ngokupheleleyo, kodwa okwangoku, ndonwabile ukuba uJLo pussy evezwe kwezi zikhundla zikarhulumente!
UJennifer Lopez imifanekiso enganxibanga evela kwividiyo entsha yomculo
Jonga iifoto zikaJennifer Lopez ze zeMert kunye noMarcus (2020) wakhe omtsha 'ongomnye kusasa'. Ubonakalise iimpundu, imilenze kunye nepussy, kodwa phantse! I-diva JLo ijongeka intle ngeminyaka yayo!
UJennifer Lopez uhamba ze kunye neziqendu ezishushu zokudityaniswa
UJennifer Lopez usinika ukujonga okuhle kakhulu kwi-esile lakhe kunye nee-boobs, njengoko esiya kwinqanaba leklabhu yomtya kwaye esenza ukudanisa! Umzimba omhlophe omdaka nge-g-string thong uyabonwa, njengoko ejikeleza kwaye ejikeleza ejonge ezantsi. I-JLo isasaza imilenze, i-twerks, kwaye ishukumisa le esile idumileyo! Iyabhabha kwaye ijike ijikeleze. Utyhala nepussy kunye neetits ebusweni bomfo. Amadoda afaka imali kwintambo yakhe aze ayiphose kuye. Emva koko usasaza imilenze kwaye siyabona phakathi kwayo. Kwangelo xesha, uConstance Wu ubukele kwaye uyayithanda, ngelixa uWu ephethe yonke imali.
Kwimeko yesibini, uLopez unxibe i-bra ebomvu kunye nepanties enomngxuma ovulekileyo obonisa ukuqaqamba kwakhe okunzulu! Unika umdaniso wethanga kwigumbi le-VIP kwabanye abafana noKristina Asriyan no-Alisa Ermolaev. Emva koko umntu uhlawula uJennifer ukuba ahambe kwaye uyaphuma. Yonwabeleni abantu!
KuleIndawo entle yesondo, uyabonaUJennifer Lopez uzange umfana,kwaye emva koko uyamphuza phakathi kwamabele ngaphambi kokuba aqhubeke phantsi atsale isikeyiti sakhe ezantsi ukuze amvezeipantyuthembele eludongeni. Inkwenkwe ngokowamanga kwaye wamphakamisa, Ebeka isandla sakhe empundwini. Bahamba baya kwigumbi lokulala aphobaba neentlobano zesini zasendle. Simbona esihla esiyakhotha impundu kaJennifer kwaye uzikhame zombini izikhwebu ngezandla zakhe. Yonwabela le ndawo igqibeleleyo yale Mamacita evelaImuvi ethi 'Inkwenkwe elandelayo'!
Ishushu iJennifer Lopez yemidlalo yeqonga ayikabikho ngoku. Le yenye yezimbalwa. Jonga i-boobs ze-Jennifer Lopez ze-naked, iingono, kunye nesondo.Ulala ngomqolo kwaye wenza uthando kwisikhundla sobufundisi kunye nesithandwa sakhe esimnyama. Okwangoku sibona amabele kaJennifer Lopez okanye ukujonga ngcono iingono zakhe ezinamanwele kunye namabele amahle, sibona apha ngezantsi xa ekhwele umfana wakhe. Yonwabela ukubukela le bhombu yesini yaseLatina!
UJennifer Lopez ulala ngesondo nomntu onomdla emva kokubhukuda. Uhamba ze kwaye umanzi kwaye uhleli ethangeni lomfana. Sibona umzimba wakhe uhamba ze xa usabelana ngesondo. Bukela uJennifer Lopez umzimba ohamba ze kwindawo yesondo ehamba ze kwi-movie yeAngel Eyes.
'Ukujika ngo U'
UJennifer Lopez uyonwabela isondo eshushu. Ulele ngomqolo emhlabeni kwaye uyambamba umfana. Imilenze yakhe isongelwe ngumfana kwaye uyamkhama. Ukusuka kwi-U-Turn.
UJennifer Lopez oshushu obonisa isifuba sakhe esishiyekileyo sasekhohlo amatyeli aliqela ngexesha lokulandelelana kwe-flashback ebandakanya imifanekiso yokulala kwakhe nomfana. Le ngono inzima!
UJennifer Lopez pussy kunye neehempe ezisezantsi
Linda linda ulinde, ngaba ndiyibona kakuhle le nto? Oops, isiliphu sikaJennifer Lopez sikhangeleka sihle kwaye simnandi kwihempe yakhe ephezulu kwi-NBCUniversal! Kukho ingqokelela enkulu ehlaziyiweyo yazo zonke izinto ezingalunganga ze-JLo!
JLo Amanzi amdaka eMiami
Umlingane wethu esimthandayo uLatina kunye noJennifer Lopez osandul 'ukuzalwa wabonisa ukumdaka kwakhe xa wayeseMiami nomyeni wakhe uAlex Rodriguez! Ndiqinisekile ukuba wayechukumisa kwaye ephulula isiziba sikaLopez ngelixa babesemotweni, kwaye xa bafuna ukushiya isithuthi, ubufazi bakhe babusemlilweni! UAlex, unethamsanqa elinethamsanqa, andikholelwa ukuba ungubani wena?
UJennifer Lopez boobs kunye nokutyibilika
Ukumkanikazi waseLatina uJennifer Lopez boobs kunye nengqokelela yesiliphu sengono! Lo mfazi u-sexy kunye nomzimba wakhe oxakekileyo zijolise kumaphupha ethu amanzi! Yithi cwaka ukuze ungamvusi umfazi wakho omdala ngelixesha uyangxola! UJennifer Lopez iingono ze-nude azithandi ukufihlwa. Kodwa ii-stylists zakhe zisonjululwe ukufihla la maqunube amnandi! Amabele akhe atyibilika amatyeli aliqela, kwaye sinayo yonke imifanekiso! Ndwendwela enye yethu abadumileyo nudes kunye nejezi!
UJennifer Lopez enxibe isuti yokuqubha
I-MILF eshushu uJennifer Lopez ubeka inani lakhe kwisibonakaliso esipheleleyo, njengoko esiya e-paddle-boarding emva kweseshoni yokucamngca ngokuzolileyo elunxwemeni kwiiTurks naseCaicos Islands. UJLo wayenxibe isuti yokuqubha emnyama kwaye wabonisa iesile lakhe elikhulu. Lo mfazi soze aguge.
avuza i-ariana enkulu nudes
Ngaba i-milana vayntrub ikhe yahamba ze
katy perry imifanekiso enganxibanga
Iifoto ze-linda blair
hilary duff ahamba ze